Iintlobo ezine ze-SEO Content eziya kunceda ukukhuthaza ukuthengisa
Isithako esibalulekileyo kunoma yisiphi isicwangciso se-SEO ngumxholo wekhwalithi, kwaye abanikazi besiza kufuneka bahlale besenza ukudala nokushicilela umxholo omhle. Abasebenzisi be-Intanethi bagcinwa kwisayithi yiloo nto ibangele ingqalelo yabo, kwaye efanayo iyababakhuthaza ukuba bayeke ulwazi lwabo lokuqhagamshelana nabo.
Ngaba uye wacinga ukuba uluphi uhlobo lomxholo olona lufanelekileyo kwi shishini kwaye luya kuphucululwa njani? uchwepheshe we-Semalt , uMax Bell, unokwabelana ngeendlela ezininzi zokuncedisa abathengisi be-digital ukuvelisa iqhinga lokuthengisa umxholo wekhonkrithi kwiinkcukacha zewebhusayithi kunye nolwazi lweendwendwe. Emva kokufumana ukusetyenziswa kwangoku kwesayithi, umnikazi wewebhusayithi unokuvelisa iintlobo ezine zoqulatho kwiindleko eziphantsi kodwa enempembelelo ephezulu kweso sakhiwo.
Eyona nto ibalulekileyo, iiblogi ziyinxalenye ebonakalayo yewebhu kwiwebhusayithi. Iiblogi zibonelela ngemfundo ephakamileyo kwiintlobo ezahlukahlukeneyo kwifom ebandakanyekayo, eyona nto ibaluleke kakhulu kwishishini kwaye amagama angundoqo agxininiswe. Ibhulogi idlulisela igunya, ubuchule kunye namava oshishino kulo mbandela. I-TechClient ifumene ukuba ama-82% wabathengi base-US abathemba ulwazi kunye neengcebiso kwiiblogi kunye no-62% wabathengi babeke umyalelo ngokusekelwe kwizithuba zeblogi.
Okwesibini, i-infographics isisityebi esikhulu sokwenza umgangatho we-SEO. kunye nokubonelela ubuchule bokuguqulela isihloko esinzima (okanye esithandekayo) into into abantu abanokuyonwabela ngayo.) U
Okwesithathu, uphando lwamaxesha luyithuba elikhethekileyo lokubonisa ububanzi kunye nobunzulu bezoshishino kunye nenkqubela yayo ngaphezu kokuqokelela idatha kwizinto ezikhokelayo. Uphando lwezifundo lunike amathuba okulawula imiyalezo echaphazela ishishini kunye nemveliso okanye iinkonzo. Umvakatyeleli wewebhusayithi unokufumana ukufundwa kwetyala ngokunika i-imeyile negama. Isifundo sobume sithunyelwa nge-imeyile kumsebenzisi, kwaye umyalezo omncoma umbulelo ufakwe njengendlela yokubonisa inceba.
Ekugqibeleni, ividyo yintonga yomxholo okumele ibe kuyo yonke ibhola yokudlala. Ukuba ifoto ifana namagama amawaka, i-video kufuneka ifaneleke izigidi ezimbini. Ngokutsho kwe ukuthengiswa kwe-digital iingcali, iividiyo ziqikelelwa ukuba zikhule zibe ngama-85% we-intanethi ye-intanethi ngo-2020 kwaye yenze enye yezindlela zokunxibelelana ezisemgangathweni. IiVideos zinganika impembelelo emangalisayo kwi-SEO nakwebhusayithi yezoshishino kuphela xa yenziwe ngendlela efanelekileyo. Iingcali ze-SEO zithetha ukuba iingcebiso ezibalulekileyo zokusebenzisa i-video ukuphucula i-SEO ziquka ukuphucula amavidiyo, ukubamba iividiyo kwiziko leenkampani kunye ne-YouTube kwaye kubandakanywa imibhalo ye-video.